कोमल वलीको विवाह किन रोकिन बहिनी प्रज्ञाले ? नारायणकाजीको कुरा गर्दा भयो हंगामा (भिडियो हेर्नुस्) - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / कोमल वलीको विवाह किन रोकिन बहिनी प्रज्ञाले ? नारायणकाजीको कुरा गर्दा भयो हंगामा (भिडियो हेर्नुस्)
नेकपा एमालेको सांसद तथा गायीका कोमल वोली अहिले प्राय आफु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ब्यस्त भएको बताएकी छन् । त्यसैले अहिले राजनीतिक काममा भन्दा पनि मतदाताको क्षेत्रमा सामाजिक काममा लागेको बताएकी छन् । उनले आफ्नो बहिनी प्रज्ञा शरदसंग मिलेर एउटा नयाँ गीत समेत बनाएको बताएकी छन् । उनले ऋषी धमलाको कार्यक्रममा आफुहरुको नयाँ गीत पनि गाएर सुनाएकी छन् ।
यो आगामी निर्वाचनको तयारी पनि भएको बताइन् । ऋषी धमलाले संधै झैं कार्यक्रममा कोमल वलीको विवाहको कुरा उठाए । उनले प्रश्न गरे तपाईलाई हेर्ने र माया गर्ने मान्छे कति छन् ? पुरुषले माया गरे की गरेनन् ? अब विवाह गर्नुहुन्छ होला नी ? यसो भन्दा कोमल र प्रज्ञा निकै हाँसे । प्रज्ञालाई दिदीको विवाह किन नगराउनुभएको भनेर प्रश्न गर्दा कोमलले मेरो विवाह नहुनुमा उसको पनि हात छ है भन्दै खुलाएकी छन् ।
कोमलको नाममा आएको पत्र प्रज्ञाले आफै लुकाएर राख्ने गरेको खुलासा गरेकी छन् । उनले दिदीले विवाह प्रेम र विवाह नगरोस् भनेर आफुले प्रेम पत्र लुकाइदिएको बताइदिइन् । कोमललाई पठाएका पत्र एक बाकस जम्मा भएको बताइन् । कोमलले भनिन्, मैले एक बाकस पत्र जम्मा गरेर राखेकी थिएँ उनले भनिन् यति धेरै पत्र पठाएका केटा मन परेन ? ऋषीले प्रश्न गर्दा पनि उनीहरु निकै रमाइलो मानेर हाँसे ।